Dhaamsa Dr. Gamachis Dasta Bubaf
Wayeen Maatii Gudina fi Baroo Tumsa Oromoo hunda ilaalata . Qabeenya fi seena Oromooti. Qabeenyan fi Seenan Maatii kana kan Oromoo milliona 50ti xura’u hin qabu. Mallaaqati jijjiramu hin qabu. Getachew Jigi Demekssa
Dr. Gamachisi Warii Siyaasaa ilee haa soban, haa dogoggoran, of ilee hajjalatan, yakki isaan salphadha. Warii atii giduu teesuu kun hundi isaan Tikka waayanne fi diina Oromoo wara hamoodha. Getachew Reda, Addisu Gebera Egizhaber fi Getachew Asefa Tikka waayanneti.
Dr.Gamachisi mal tate amanun dadhabem, namoon guyaa guyaan na bareesu hin amanun jedhem ilmaa leencaati intala leencaa of birra qaba Oromoo hin gurguru waayannet harka hin latuu jedhen siif falmadhe, Sagale waaqayootu birra jira, Sagalee Afura Oromoo Gudiina Tumsatuu birra jira, dhiiga Baro Tumsatuu bira jira jedhen siif falmadhe. Game maltu sii xuuqee?, maloo Dhiigi Gudina fi Baroo mal siin jedhu.
Obbo Nagasa enyutu ajese jedhe sii gafanan deebi na dhorkateem. Obbo Nagasan du'aa waaqayoo du'aan miti kana atuu beektami. Dr. Gamachiis wa'ee dhigga ijoolee Oromoo 500 waaqayoo mal jeedha jeete yaada atoo na caalaa amanta,? Wa'ee Ijoolee Mada'aan harki isaan rama'ee jiruu yadeeta? Inni Harki isaa rama'ee Dr. Solomon Ungashe mallaaqa kadhatuuf Maqan isaa sii fakata Gamachisi jedhama.
Jalala fi kabajan Maati Gudina fi Baroo Tumsaf qabu mal godhuu? Oromoon Millioni 50 siti gadeera beki, Wariii caalisee irra ana isaa dhuga dubatee wayaa nami sitii hin gadiin hin jiru. Hormi Afaan Horman barrese ani ammoo afaan diina wa'ee Oromoo barreesu hin feedhu, Bilbila keen dhabee malee kana iyuu media irratti hin bareesuun ture, Siimatii hunda isaa himen sii amansisan ture, badiin kun waan salpha miti keesuumatti yeroo dhigi Oromoo dhangala'aa jiru kanati. Afuura Oromootuu sii bira jira afuuri Luba Gudina Tumsa siiti gadeera. Maliif waaqayoon nu jibisifta? Malifi Amanta waaqarati nu dhabsisifta? Maliif Luba Gudina hin tatu? Lensan fi Kulanin maal siin jeedhu?
Namoon waan bayee heedu na bareesan Ani garuu Afura Luba Gundina fi hayyama isaa malee hama tokko ilee hin dubadhu. Ani Luba Gubina akka waaqatin amana maati isaa jeequu hin barbadu afuura isaatu nati gada jeedhen yaada atii kana maliif hin yadnee? Waaqayoon yoo sodachuu batee Dhiiga Luba Gudina fi Baroo sodadhu diina Oromoo jala hin deemin waan hunda qabda amantaa Oromoo irra hin dhabini, Abaa fi Haatii kee Oromoof wara midhamanidha. Isaanilee Kabaja guda qabu Hiriyaa Abiyuu Galata fi Iseaq Angosdha.seenaa kana sodadhutti waayannee wajjin qunamtii qabdu kana dhisi. Dukanan Duba Dirama Dhaabaa wayeesa dhageefadhu.
Wa'een Maatii Gudina fi Baroo Tumsa Oromoo hunda ilaalata Qabeenya fi seena Oromooti. Qabeenyan fi Seenan Maatii kana kan Oromoo milliona 50ti xura’u hin qabu. Mallaaqati jijjiramu hin qabu. Sii deefachuuf malee sii yakkuuf miti, Oromoof waan ta'uu malu nan falmadha. Waan hunda beekta jarii giduu teese kun hundi wara Oromoo ajeesa jiran ta'uu beekta, wara kara hunda Oromoo to'achuuf deeman ta'uu ni beekta, wara Walda Evalichal Church Oromoo dhunfachuf folata'n ta'uu ni beekta, garuu waan tokko walalte innis jarii kun Oromoo ajjeesa jiru kanafuu dhiyooti akka isaan kufan walalalte.
Tv fi Redion isaan siif banan Oromoo akka Gargaruuf miti akka Oromoo Burjajeesuuf, akka Oromoo fajaachuuf, akka Oromoon TPLF jalati jilbenfatuuf malee isaan sagale Oromoo Paarlamaa kessatu daqiqa tokkof ilee dhaga'uu hin barbadan tv fi redio irratti isaa darbu dhisiti. Qeeroon Oromoo kana boode Sagalee Afuura keesuma iyuu Tv waayanne irran darbuu hin dageefatu, Waan Getachew Reda Ebbisee bane Oromoof Abaramadha Oromoon hin dhagefatu. Waan tokko Haqa siti himu TPLF siin falla Walda Mekane Yesus akka adeemtuuf siin Finfinneetti fidan akka Isilama irratti "Alhabash" fake Musilim ijjaran siin ammo Kirstyana soba Oromoo irratti ijara jiru, garu kana hin milkooftu. sababii isaa dhiiga Luba Gudina Tumsaa Sii hin simatu kun dhugadha. Waraaqisa qube Genereshini waan diigu nan falmadha. Barii kun bara tefozooti ani Oromumaa koof Tefozoo hin barbaduu Harki koo diiga fi mallaaqa hin qabu. Wal gorsu wayya wal hamachu irra.
Oromoo na ofkalchaa
Afuuri Luba Gudina Tumsa Oromoo dabarse hin latuu !!
Toftan Waayanne TPLF ni fashala imiman Milliona 50 qabsoo ijoolee Oromoon haqama.